Mitadiava fanampiana - Banky Sakafo any Galveston County
Momba ny GCFB
Asa ao amin'ny GCFB
Fanambarana tsy fanavakavahana
Vaovao farany COVID
Fanentanana ara-tsakafo ho an'ny ankizy
Fandraisana anjara amin'ny sakafo mahavelona
Fanabeazana momba ny sakafo
Mitadiava fanampiana ara-tsakafo
MITONDRA DRIVA HANANA / HANAO
Sakafo sy sakafo ara-bola
Ankizy ho an'i Kidz
Fahafahana mpilatsaka an-tsitrapo
Ny trano fanatobiana haunted
Mifindra amin'ny hanoanana
Mizarà ny fialantsasatrao
MANDEHA VOLA ANIO
FOMBA hafa hanaovana DONATE
Raha mitady fanampiana amin'ny sakafo ianao na olona fantatrao dia ampiasao ny sari-tany etsy ambany hahitanao toerana akaiky anao.
Zava-dehibe: Mamporisika anao izahay hifandray amin'ny masoivoho alohan'ny hitsidihanao mba hanamafisana ny ora sy ny serivisy omeny. Azafady mba jereo ny kalandrie finday eo ambanin'ny Sarintany hijerena ireo ora sy toerana anaovana fizarana sakafo finday.
Tongava masoivoho mandray anjara
Tsindrio ny bokotra eto ambany mba hisintomana ny rindram-baovaonay ho tonga tranom-pantry vaovao, finday na tranokala fisakafoanana.
Kamiao mifindra finday
Ny fizarana sakafo an-tariby dia mitranga amin'ny tranokalan'ny mpiara-miasa amin'ny alàlan'ny Galveston County amin'ny andro sy ora voatondro mialoha (azafady jereo ny kalandrie). Ireo dia hetsika an-dàlam-pandehanana izay hanoratan'ny mpandray fisoratana anarana hahazoana sakafo mahavelona betsaka. Ny mpikambana iray ao amin'ny ankohonana dia tokony ho eo handray sakafo. Ny famantarana na antontan-taratasy dia TSY takiana mba hanatrehana fizarana sakafo amin'ny finday. Raha mila fanontaniana dia andefaso mailaka Kely Boyer.
Ny fisoratana anarana / Check-In dia vita amin'ny toerana misy ny finday mandritra ny fitsidihana tsirairay.
Ho an'ny kinova misy pirinty amin'ny kalandrie, tsindrio azafady ny bokotra etsy ambany.
Oktobra 2021 Kalandrie fizarana finday
Fampahalalana momba ny pantry:
9 maraina - 3 hariva (talata-alakamisy); 9 maraina - 12 hariva (zoma)
Ora fiasana: 8 maraina - 4 hariva (Alatsinainy-zoma)
Tsindrio eto raha hijery safidy E-mail
Ny Bankin'ny Sakafo any Galveston County dia voasoratra anarana ho fikambanana tsy mitady tombony 501 (c) (3). Ny fandraisana anjara dia azo alaina araka ny lalàna alain'ny lalàna. Ny Bankin'ny Sakafo any Galveston County dia mino ny fanaovana asa-tanana amin-kitsimpo sy tsy fivadihana tanteraka. Serivisy jiro mamela ny Galveston County Food Bank mitazona ireto fitsipika ireto amin'ny alàlan'ny fanaovana fitaovana ho an'ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina, ao anatin'izany ny mpiasan'ny Food Bank, mba handefa tatitra tsiambaratelo, sosokevitra na fitarainana amin'ny antoko fahatelo izay manampy ny fitantanan-draharahan'ny Bankin'ny Sakafo any Galveston hamaha ny olana ary mitazona ny maha-matihanina azy ireo. fenitra. Ity andrim-panjakana ity dia mpamatsy tombontsoa mitovy.
Azafady tsindrio eto raha hamaky ny Politikan'ny mpanome.
Copyright © 2021 Banky Sakafo any Galveston County - Zo rehetra voatokana. Powered by Get Social!